सनी लियोनी बनिन् जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । पोर्न फिल्मपछि बलिवुडमा स्थान बनाएकी अभिनेत्री सनी लियोनी फेरि आमा बनेकी छिन्। गत वर्ष सनीले एक बालिकालाई अपनाएकी थिइन् भने यस पटक उनले एक फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छिन् । जसमा उनका श्रीमान र उनले गतवर्ष अपनाएकी छोरी बाहेक दुई साना छोराछोरी समेत देखिएका छन् ।
सनीले उक्त तस्वीरका साथ सोशल मिडियामा लेखेकी छिन्, ‘यो भगवानको अनुग्रह हो ! जून २१, २०१७ को त्यो दिन थियो जब मेरो श्रीमान र मैले महशुस गरेका थियौं कि हाम्रो छिटै तीन बच्चा हुनेछन् । ‘हामीले योजना बनायौं र हाम्रो परिवारलाई ठुलो बनाउँने प्रयास गर्यौ । धेरै वर्ष पछि, यो परिवार अन्ततः असार सिंह वेबर, नोहा सिंह वेबर र निशा कौर वेबरसंगै पुर्ण भएको छ ।’
‘हाम्रा बच्चा केही दिन अघि जन्मेका हुन् तर हाम्रो हृदय र आँखामा धेरै वर्ष पहिले देखि थिए। इश्वरले हाम्रो लागि एक विशेष योजना बनाउनुभयो र हामीलाई एक ठूलो परिवार दिनुभयो । हामी तीन धेरै सुन्दर बच्चाहरुका आमाबाबु हौ। यो सबैको लागि एक आश्चर्य छ !’
तर सनीले यी बच्चाहरूलाई जन्म दिएकी हुन् ? यी प्रश्नहरू सोशल मिडियामा सोधेका थिए । तिनीको जवाफ सनीले दिएकी छिन् ।
सनीले लेखेकी छिन्, ‘ कुनै भ्रम नहोस्, म भन्न चाहन्छु कि असारर र नोहा हाम्रो जैविक बच्चा हुन् । हामीले धेरै वर्ष पहिले परिवार पूरा गर्न सरोगेसीको विकल्प छानेका थियौं र अब यो अन्तमा पुरा भएको छ । म धेरै खुसी छु ।’